Okulandelayo | Ukuqeqeshwa Kobuholi
Ukuqeqeshwa Kobuholi Nge-NextMapping ™
Ikusasa lomsebenzi lidinga isethi entsha yamakhono ngabaholi namaqembu.
Izinkampani ezinjengeAmazon zitshala izinkulungwane zezigidi ekuvuseleleni amandla futhi ziphinde zinikeze amandla abasebenzi. Ukuqhubeka kokuhlala ulungele ikusasa kubaqashi nabasebenzi futhi lokhu kufaka ukugxila ekufundeni impilo yonke.
Ukwenza ushintsho olukhulu futhi olunamandla abaholi namalungu eqembu kumele enze ushintsho ekuziphatheni komuntu siqu. Indlela engcono yokushintsha kokuziphatha ukuphindaphinda ukufunda kanye nokusebenzisa isikhathi sangempela kwalokho okufundile.
Ukuqeqeshwa kwethu kobuholi be-NextMping ™ kuyatholakala cishe nge-Zoom, izifundo online ukugxila ikusasa lomsebenzi kanye nokuqeqeshwa okwenziwe ngokwezifiso okungathunyelwa ngeWebinar noma kufakwe amalebula amhlophe kwabangane bakho.
Ngabe i-2030 ibukeka kanjani ...
… Uma usebenzise utshalomali lwakho ekuthuthukiseni amakhono aphezulu emaqenjini akho?
Ngabe wena nabaholi bakho nihola phambili ngekusasa?
Kumaqiniso omatasatasa omsebenzi wanamuhla wokusebenzela inzuzo enkulu yokuncintisana ngokuba yinkampani nabaholi abaningi namaqembu athuthukile.
Uyini uhlelo lwakho lokuqinisekisa ukuthi abantu bakho banokuqeqeshwa kwakamuva kakhulu futhi kusesikhathini kakhulu ukuze bahlangabezane noshintsho oluqhubekayo kanye nezidingo zemboni yakho?
Ucwaningo lukhombisa ukuthi ama-Millenials noGen Z bazohlala isikhathi eside ezinkampanini ezihlinzeka ngamathuba aqhubekayo okufunda nawentuthuko ngokuqeqeshwa.
Ucwaningo luphinde lukhombise ukuthi imisebenzi yendabuko kanye nezindima kuzoba yinto yesikhathi esedlule nokuthi izindawo zomsebenzi ezizayo zizoba nokuhlanganiswa okugcwele, okuyingxenye yesikhathi nabasebenzi abazimele.
Amakhono adingekayo ...
Amakhono adingekayo ukuzulazula leli kusasa elizayo elishintsha ngokushesha afaka:
Amandla okuphatha inani elikhulu lolwazi kanye nokubona inkambo engcono kakhulu yokusebenza
Amandla okuhola ushintsho ngesibindi, ukuqondisa, ukuqiniseka kanye nombono
Amandla wokuqonda izimo eziningi nokuxhumana nababambe iqhaza abahlukahlukene
Amandla wokusebenzisana nokwenza izinto nabantu abahlukahlukene abanobuntu obuhlukahlukene
Amandla wokusebenzisa ubuchwepheshe ngokugxila ngokuyinhloko 'kubantu kuqala'
Amandla wokusebenzisa ikusasa elibalulekile lamakhono omsebenzi 'wamakhono wokuxhumana nabantu'
Ama-76% we-CEO abala ukuthuthukiswa kwamakhono okulungele ikusasa kubaholi namaqembu njengomkhakha omkhulu okumele kugxilwe kuwo njengoba siya ku-2030.
I-70% yezinhlangano ikhipha izikhala zokuthola amandla njengenye yezinselelo zabo ezinhlanu eziphezulu.
I-49% yabasebenzi kuphela ethi izinkampani zabo zihlinzeka ngamakhono okuqeqeshwa namathuba okukhula.
Indlela entsha yokuthuthukiswa kwamakhono
Izindlela zokuqeqeshwa ngokwesintu zesikhathi esedlule ngeke zilungiselele abaholi namaqembu ngekusasa.
Indlela entsha yokuthuthukiswa kwamakhono iyadingeka - indlela entsha ifaka phakathi ikharikhulamu exhumene nezimo zesikhathi sangempela emsebenzini. Kwa-NextMapping TM abeluleki bethu baqinisekisiwe ngamasu wokuqeqesha ahambelana nenqubo yethu ye-NextMapping ™.
Ukuze senze ukuqeqeshwa kube 'yinduku' yethu inqubo yethu ephathelene nokuqinisekisa ukugcinwa okungama-90% ++, isilinganiso sokufaka isicelo esingu-70% ekuqeqeshweni kokuthunyelwa komsebenzi kanye nokuthuthuka okulinganiselayo kwesikhathi eside ekusebenzeni komsebenzi.
Umphumela wokuqeda izinhlelo zokuqeqesha ufaka:
Ukukhula kwebhizinisi okukhulayo njengoba abaholi namaqembu enamakhono enyuka
Kukhuliswe ukwanda nobumbano phakathi kwabaholi nangaphakathi kwamaqembu
Ukwanda kwezixazululo zamakhasimende wokuqamba ngenxa yamalungu eqembu aphezulu anamakhono futhi anikwe amandla
Isisusa esandayo nokuzibandakanya kubo bonke abasebenzi
Ukwanda kwekhono lokuqasha nokugcina ithalente elenza imisebenzi ephezulu
Ukwanda kobuholi nokuhlangana kwethimba ekwakheni umbono nokugxilwe esikhathini esizayo
Sinikeza ukuhola kanye nezinhlelo zokuqeqesha iqembu ngokusebenzisa izindlela ezahlukahlukene zokulethwa kufaka phakathi umuntu uqobo, i-virtual ngokusebenzisa i-Zoom noma i-WebEX, ukuqeqeshwa kwamavidiyo aku-inthanethi nokukhiqizwa kwegeyimu.
Bonke abathweswe iziqu ezinhlelweni zethu bathola isitifiketi sokuphothulwa se-NextMiling ™.